Excellent yokuhlala kukhetha ehhotela "Basilica". Kazan amanga lapho kwakuphambana khona amasiko amabili ukuthi ufane ngokuvumelanayo ku isithombe esisodwa. Yingakho le ndawo ivame ukuba uvakashele lenqwaba izivakashi.
Zonke ezidingekile izimo zokuphila ukhululekile ukuba Ihhotela "Basilica". Kazan izinkulungwane zezivakashi kanye nosomabhizinisi. Kubaluleke kakhulu ukuba ukwazi nokuphumula ngokugcwele alulame amandla phambi kosuku, egcwele ethakazelisayo. Lapha ungakwazi ukusizakala zokungena Inthanethi ukuze njalo ixhunyiwe, kanye yangasese yokupaka endaweni namanye amasevisi amaningi.
yokuhlala ngempela ukhululekile linikeza izivakashi zayo ehhotela "Basilica". Kazan kuzovula phambi kwakho yonke inkazimulo yayo kusukela amafasitela emakamelweni. Amakamelo anemisila zonke Izinsiza ezidingekayo, okuyinto esetshenziswa izivakashi yesimanje. Igumbi ngalinye has a yokugezela yangasese nge eshaweni. isikhathi sabo sokuphumula ungagcwalisa iziteshi satellite.
Imigomo yokudlela izici ehhotela "Basilica". Kazan kungakuqinisa Symbiosis ujabule cuisine Russian nesiTatar. Esikhathini yokudlela izivakashi kungenziwa wakhonza ibhulakufesi, futhi uma kudingekile, ukulethwa ukudla Kwenziwa ngqo ekamelweni lakho.
Ihhotela "Basilica" (Kazan) - ukuthi bangafinyelelwa kanjani abantu
Lesi sakhiwo libhekene indawo ngempela elula (nje ingxenye yesine ka ahambe amahora kusukela ngumgogodla ezikhungweni zomsebenzi idolobha). Futhi eseduze kuyinto echibini olunothile Nizhny Kaban. Uzothola ezikhangayo ezifana ezibiyele, kanye Zoological futhi Botanic Garden. Indawo yokudlela itholakala nje 3 km kusuka esiteshini sesitimela futhi km 25 kusuka esikhumulweni sezindiza.
Ihhotela "Basilica" e Kazan sise emgwaqweni Sadykova Sarah, 49. Uma ufika emzini ngendiza, bese kungcono ukuya ehhotela ngeteksi. Kusukela esiteshini sesitimela ugijimela inombolo Shuttle 79 (phuma ngaso Akhtyamova emgwaqweni). Idolobha kuyinto elula kunazo ukufinyelela ngebhasi №5.
Ihhotela "Basilica" (Kazan) - incazelo amakamelo
Kulesi ehhotela ungahlala kwelinye lamagumbi 70 ukhululekile izigaba ezilandelayo:
"Standard-1" kuyinto encane eyodwa noma ezimbili imibhede olulodwa. Sicela uqaphele ukuthi amafasitela emakamelweni mhlawumbe abekho noma ophahleni.
"Standard-2" - elikhulu, amakamelo ukhululekile nge double imibhede wamathambo. Futhi egumbini has a edeskini, izihlalo zokhuni nezinye Izinsiza ezidingekayo ukuhlala ukhululekile.
"Standard Plus" ihlukile ezingeni eliphezulu wenduduzo. Ngaphezu izici ezithile ukuze isigaba odlule, kukhona zihlalo endaweni encane nge armchairs ezimbili.
Non-isigaba "luxe" siqukethe egumbini lokuphumula nasekamelweni zihlukaniswe a yiminyango. Ukubekwa kwenziwa embhedeni enkulu SOFAS nesibaya ukuphuma ongakhonza embhedeni njengoba ethe xaxa.
ezenza ukuze ajabulise izivakashi ehhotela inikeza "Basilica" (Kazan). Izithombe zibonisa amakamelo izibambe isitayela laconic umhlobiso kanye predominance ka opholile iyashintsha iyaphupha ibe amathoni. Ngokuphathelene egumbini imishini, ungakwazi ukujabulela Izinsiza ezilandelayo:
TV wesimanje uxhumeke satellite dish (ungakwazi ukubuka kweshumi izindaba nokuzijabulisa iziteshi eziningana);
I amakamelo ehhotela babe ngabanye emoyeni isimo sokusungula lokushisa air ukhululekile;
amakamelo Standard anemisila abalandeli;
sibonga khona socingweni, ungakwazi ukubuza imibuzo mayelana abasebenzi reception ngaphandle kokushiya ezindlini zabo;
ibha mini ingaba njengesihluthulelo imbala, futhi kungenza uyogcwala utshwala kanye iziphuzo carbonated for imali eyengeziwe;
WC ifakwe eshaweni, i hairdryer kagesi, okugeza izesekeli izimonyo nezinto eziphathelene nenhlanzeko.
"Basilica" (Kazan) - Ihhotela enikeza izivakashi zayo zisebenzisa ohlwini olulandelayo amaphrojekthi engqalasizinda:
ngesisekelo yokudlela yehhotela, lapho ungakwazi ukujabulela izitsha bendabuko Russian futhi Tatar;
khulula ukufinyelela wireless inthanethi kulo lonke ihhotela;
yezivakashi owafika ehhotela ngemoto yakho siqu, isikhala yokupaka endaweni kuqashelwe yokupaka;
A izindawo ezikhethekile ukubhema; Okwemicimbi ibhizinisi, ihlinzeka Igumbi lenkomfa yesimanje;
Uma udinga geza pat izinto, bese ecela usizo elondolo.
Ihhotela likuvumela amasevisi alandelayo:
Izivakashi zithole ithuba ukufaka ibhulakufesi zilethwe ku segumbi;
ngoba edeskini reception usebenza ubusuku nemini, ngeke nganoma isiphi isikhathi akwazi ukuxazulula izinkinga ezihambisana ngendawo yokuhlala, futhi uthole iseluleko imibuzo yakho;
Bakwazi nokuhlela imikhosi kanye amadili e yokudlela ihhotela;
ungaphila iphiko esikhethekile non-ababhemayo;
It inikeza ithuba lokuya wayethathe uhambo oluya kuyo ezikhangayo esemqoka Kazan;
uma kunesidingo, ungase unikezwe inkonzo Shuttle esikhumulweni sezindiza futhi sesitimela.
A ethandwa kakhulu yokuhlala kukhetha ehhotela "Basilica" (Kazan). Ukubhuka kusengaphambili kungcono ukuba afeze ifomu ekhethekile kuwebhusayithi olusemthethweni ehhotela. Ihhotela Administrator uzokuthinta ukuqinisekisa ukubhuka. Futhi ungakwazi ukuqasha igumbi ngocingo 8 (843) 202-06-44, kanye ekhethekile imithombo inthanethi. Ukubhukha kuyenziwa ngaphandle pre-yokukhokha kanye isenzo kuya 18:00.
Ulwazi olubalulekile yezivakashi
Le mpahla, le mithetho elandelayo mayelana yokuhlala:
iwashi ibalwa, okuyinto ikhiqizwa futhi izivakashi phuma babelwa, ngokulandelana, futhi ngo 14:00 emini (oda singashintshwa uma inombolo ezanele amakamelo etholakalayo);
imibhede Extra kuyinto ruble ngabunye 1,000;
Ihhotela kungaqali ezifuywayo;
Ungakhokhela amasevisi wathola esebenzisa amakhadi epulasitiki;
uma khipha ama-akhawunti olusemthethweni for ukuzithoba emagunyeni intela kungenziwa enikeziwe.
Enough enkulu ukudweba isikhungo ezifana hotel "Basilica" (Kazan). Izibuyekezo zifaka okulandelayo okushiwo omuhle:
ibhulakufesi ezinhle eqotho kunothile amasevisi;
ezikhangayo esemqoka edolobheni kukhona ngaphakathi ukuhamba ibanga;
kumnandi, nobungane futhi ube usizo abasebenzi, ozama ngazo zonke izindlela ukujabulisa izivakashi;
leli hhotela endaweni enhle kakhulu, sizungezwe izakhiwo amahle amathempeli;
sibonga soundproofing ezinhle ngeke iphazamise umsindo imihubhe noma amakamelo ezingomakhelwane;
SIZA khona egcekeni amabhentshi kanye ebaleni lokudlala, lapho ungakwazi ukuchitha isikhathi sakho.
Indawo kuleli hhotela libhekene bokwenza elandelayo:
Dinga esiphuthumayo ukulungisa izindlu zangasese emakamelweni, ezihlinzekwa yihhotela "Basilica" (Kazan). Izithombe ezithathwe yizivakashi, bonisa isikhunta nokuxebuka usimende.
Ngemva kokuthatha eshaweni zonke amanzi phansi.
Nezincekukazi abazigezi phansi ngaphansi imibhede.
Ngenxa ukupholisa ompofu amashubhu nezindonga egumbini lokugezela uya condensate.
Ihhotela ayinakho ikheshi, kunzima kakhulu kulabo abahlala abahlala izitezi.
Ragged zokulala (kodwa kuyafaneleka ukuba ikhokhe intela ebumsulweni nasebunyeni).
I imibhede omatilasi ubudala, iziphethu kuyiphi ohlatshwayo ubuhlungu emuva.
ukudideka Constant zempi (uma ngaphambilini Igumbi ngokusebenzisa izinsiza zama-third party, hhayi ngokusebenzisa website esemthethweni).
Amawindi akudingeki amanetha omiyane, ngakho uma ufuna pholisa igumbi, wena fly egumbini okuningi izinambuzane.
Ngenxa yokuthi akukho amakhethini emafasiteleni, ehlobo ngefasitela ilanga liyashisa kakhulu.
internet Ihamba kancane kakhulu.
Ihhotela "Basilica" - kungcono impela ethandwa yokuhlala inketho izivakashi Kazan. Leli hhotela isithandwa izivakashi ngenxa indawo yayo elula futhi amanani eliphusile yokuhlala. Impahla lemizuzu-15 ukusuka edolobheni, lapho ezikhangayo esemqoka. Libuye eduze ezokuthutha zomphakathi, ngakho ungakwazi ngokushesha uthole kunoma iyiphi indawo oyifunayo. Le ndawo kakhulu efanayo lapho ihhotela itholakala, futhi enhle ngempela ngenxa zizithola ziphakathi kwezakhiwo eziningi zomlando kanye amathempeli.
Uma sikhuluma umhlobiso ingaphakathi ehhotela, Uma unganakile kubukeka ngempela ehloniphekile. Kodwa lapho sihlolisisa ungabona ukuthi ukulungiswa zenziwa okukha phezulu. Abaningi emakamelweni kungabonwa uyaxebuka usimende, amabala ezindongeni nezinye izikhathi edabukisayo. Ngaphezu kwalokho, esikhundleni isidingo omatilasi ku imibhede. Enye yezinkinga ezimbi kakhulu - it is a yokugezela. Akukhona lokho kuphela, ngemva kokugeza phansi ezakhiwe uzamcolo, ngakho ngaphezulu kanye condensate eqoqwe ezindongeni ngenxa yezinkinga ukupholisa. Nokho, uma ungenawo uhlela ukuba ahlale isikhathi eside, bese lezi amaphutha ungakwazi uvale amehlo akho.
intengo ukudla yokudlela overpriced. Ngiyajabula ngokuthi ibhulakufesi akukhona ngempela emananini, kodwa ngoba ungathola ezinye okunye. Ngo ukuhamba ibanga kukhona amathilomu eziningi zokudla lapho amanani ephansi bese izinga ukudla kungcono okuningi. Kufanele uyinaka lezo zindawo lapho abendawo beya. Ziyakwazi engabizi kakhulu, ungazama okumnandi ukudla lwesiTatar.
Ngakho, singasho ukuthi "Basilica" ehhotela kungaba yindawo enhle ukuhlala kulabo ngifuna yokuhlala ezingabizi maphakathi edolobheni hhayi banake ezinye ngokuphazamiseka. Uma usetha usuku lonke yokubuka izinto Kazan noma emsebenzini, kungenzeka ngeke uphawule amaphutha amaningi (yokuntuleka ikheshi, amabala ezindongeni, egqwalile nelineni, njll). Kodwa ukuhlala isikhathi esijana kufanele uthole kukho ngokunethezeka (mhlawumbe ngenjongo yokuthola imali ngaphezulu).
Ihhotela le-Villa Fatima 2 * (North Goa, India): izincazelo, izithombe kanye nezivakashi zokubuyekezwa
Ihhotela "Parade", Yaroslavl: incazelo, ekuhlaziyeni izinombolo kanye nokubuyekeza
Emahhotela aphambili e Ryazan: izithombe kanye nokubuyekeza
Ephephile sokukhulelwa izinsuku: kanjani ukubala? Indlela ikhalenda zokuvimbela inzalo: izinsuku ephephile
Beginners izisebenzi izikhulu: Izibonelo ingxoxo
Umshuwalense wokuphila we-mortgage uyadingeka noma cha?
Gravy Inkukhu izinhliziyo: izithombe kanye zokupheka
Tashkent amanyuvesi: yini ukukhetha?